Specification Constant Kasira (R22, LSS 60Hz 3Φ, 380V / 460V) - China AOXIN HVAC PART
Specification Constant Kasira (R22, LSS 60Hz 3Φ, 380V / 460V)
Refrigerant mhando maitikiro Voltage mudungwe mhando Ari
kutonhora capacity chiyamuro kan COP
R22 LSS 60Hz 3Φ, 380V ba SQ028UA 28.500 8.353 2.639 10.8 3.17
LG Compressor uye injini zvinopa rinogutsa uye kusiyaniswa tsika vatengi zvikasiyanasiyana vava boka nyika eco ushamwari & simba okuponesa michina. Zvirokwazvo LG ari akaramba Virtual boka mukuru-zvakarurama machine uye ungano michina kubva akaunganidza dzokubvisa generating inogona kuenderera nyika yakanakisisa zvinoriumba uye zvinopa inverter zvachose dambudziko optimized kuti dzinogarwa uye vezvokutengeserana ezvinhu kuitira kuti anunure mumwe agutsikane pamwero kuti shamwari dzedu dzose.
Nokutsikirira zvose huru uye ezasi mapuranga ari wehunyambiri akabatana ari choga kunonatsiridza kunangiswa uye kunyatsoshanda kuburikidza kurerutsa nemishonga.
Urefu iri optimized uye uremu ipfupi nokutsikirira rezasi furemu kupinda goko muviri uye ipapo Welding.
Gas Force Mechanisation
Tip chisimbiso mashandiro kunogona disadvantageous kuti gasi simba mashandiro nokuda zvinogona leakage kuti anogona kuitika kuburikidza muromo chisimbiso Clearance. Gas simba mashandiro utilizes zvenguva vachimanikidzwa kuti kunama mupumburu yakatarwa uye kuderedza leakage, saka zvichiita kugadzira yakakwirira kunyatsoshanda compressor.
New restarting Mechanisation
Relief nzira iri muchadenga rwakapetwa kunonatsiridza compressor restart mashandiro nokubvumira vaiswa parumananzombe zvenguva kumanikidzwa gasi kuti nokukurumidza kutiza kana compressor anosvika chemabhazi.
Previous: Specification Constant Kasira (R22, LSS)
Next: Specification Constant nokukurumidza-2nd Generation (R410A, LSS 60Hz 1Φ, 208-230V)
High kunyatsoshanda Ac Compressor
High kunyatsoshanda Mupumburu Compressor
Horizontal Rakafa Compressor
Mupumburu Air conditioner Compressor
Mupumburu Compressor Manufacturers
Specification-Constant nokukurumidza (R22, 1Piston 50Hz ...
Specification Constant Kasira (R22, LSS 50Hz)
Specification-Constant nokukurumidza (R22, 1Piston 60Hz ...
Specification-Constant nokukurumidza (R134a, 1Piston 50 ...
Specification-Constant nokukurumidza (R410A, 1Piston 6 ...